Rayson ao amin'ny Rayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Vokatra lehibe Shina mpanamboatra matady marobe.
fandriana fitambaran'entana marobe Ny vokatra dia mivoaka ho an'ny fananana mekanika miorina tsara. Tsaboina ao ambanin'ny hafanana na ny hatsiaka, ny singa mekanika dia afaka mitsangana amin'ny toe-javatra tafahoatra.
Sariaka ny tontolo iainana. Tsy hiteraka fahalotoana toy ny VOC, firaka, na akora nela atiny an-tany rehefa esorina izy ireo. fandrefesana vita afovoany
dia amboarina mifototra amin'ny fomba maro isan-karazany ao anatin'izany ny fomba nentim-paharazana mamolavola fomba, pyrograph avo lenta, ary lokon'ny glazed. Izy io dia vita amin'ny lamba miloko, tsipika milamina ary modely mahaliana. Hita ny antsipiriany amin'ny antsipirihany ny asa tanana niavaka sy ny hatsarany.